APPLE "SHARCIGA BASHKIR BEAUTY", HABKA IYO DARYEELKA, SAWIR - GEED GEEDEEDKA
Sirqarinta beerashada guulaha ee geedaha tufaaxa "Bashkir Beauty"
Doorashada nooc ka mid ah tufaax ah si ay u koraan beerta aan, waxaan rabaa in ay leeyihiin muuqaal raaxo leh, miraha dhadhan fiican leh iyo, iyada oo aan loo eegin xaaladaha cimilada, had iyo jeer soo qaado dalag joogto ah. Geedka tufaaxa "Bashkir Beauty" ayaa cadeeyay dhammaan sifooyinkaasi - waxaad ka heli doontaa sharaxaad kala duwan oo sawiro leh, iyo sidoo kale sifooyinka beeritaanka iyo beerashada qodobkan.
Taariikhda noocyada kala duwan
"Bashkir Beauty" - horaantii xilliga qaboobaha u adkaysta qaboobaha, kaas oo lagu dhalaaliyay jinsiyadaha qaranka, magaca asalka ah lama yaqaan. Waxaa markii hore lagu sharraxay 1928, waxaana loo diiwaangeliyey sidii loo beeray warshad miro leh oo ka timid shaqaale ka tirsan saldhigga tijaabada-farsamada Strelayev, waxana uu ka yimid isaga oo helay magaca "Bashkir Beauty".
1886-kii markii ugu horreysay ee Ruushka aheyd markii ugu horraysay ayaa lagu soo wareejiyay warshad "Bashkir Beauty". Markii ugu horreysey waxaa loo dhisay dalka Territorial Research Institute of CX, horaantii dhulalkan waxaa maamula Ganacsatada Gribushin. Waqtigeennu, "Bashkir Beauty" ayaa caan ku ah bannaanka u gaarka ah iyo kuwa warshadaha ka dhexjirta, waxaanay kor u qaadeen oo keliya Bashkortostan, laakiin sidoo kale waxay ku shaqeeyaan dhammaan dhulka Ruushka.
Wood waxaa lagu qiimeeyaa muuqaalkeeda, dhalidiisa, iyo cimri dhererkeeda. Waxay quruxbadan tahay ubaxyada quruxda badan iyo miraha quruxda badan.
Hubi noocyada kale ee geedaha tufaaxa: Melba, Uslada, Candy, Northern Sinap, Sun, Currency, Berkutov, Sinap Orlovsky, Mechta, Zhigulevskoe.
Geed waxaa loola jeedaa dhexdhexaadin xoog leh. Crohn waxay leedahay qaab isku dhafan oo da'doodu yar tahay, ka dib marka soo galo fruiting waxay noqotaa mid ballaaran, barbaro yar, caleenta dhagxaanta dhexdhexaad ah. Laamiyadu waxay si adag u dhejiyeen jirridda, ka baxa xagasha 90 °. On laanta ugu muhiimsan iyo on jir, jilifku waa siman, brown-cagaaran. Caleemaha waa wareegsan, cabbirka caadiga ah, toosan, midabka madow-brown, shaggy.
Waxyaabaha kala duwan ee geedaha beerto-yar ee dhallinyarada ah ayaa lagu kala saaraa xaqiiqda ah dusha sare ee caleemaha waa caddaan ah oo loo yaqaan pubescencemarka loo eego geedka isla markiiba soo jiidata.
Caleemaha waa weyn, oval-qaabeeya, cagaar, dushooda oo leh calaamad gaaban. Cidhifyada caleenta ah waxay leeyihiin qulqulo dharaar ah. Dhinaca sare ee saxanka caleen waa siman, flat, xajmiga, wax yar wax xiiran, dhinaca danbena waa ka carar.
Ubax ku dhaca celcelis ahaan waxay dhacdaa qeybta dambe ee Maajo. Ubaxyo waaweyn oo midab cad iyo midab casaan ah, ayaa lagu soo ururiyey inflorescences dhexdhexaad ah, ka soo baxa caraf udgoon.
Miraha waxay leeyihiin tiro ah ilaa 100 g, laakiin haddii aad si joogto ah u quudiso dhirta, waxaad ka heli kartaa ilaa 140 g Tufan waa qaab-qaabsan, qaab joogto ah, hal-cabbir. Maqaarku waa mid sahlan, dhalaalaya, qaro weyn oo adag. Tufaaxa caanuhu waxay leeyihiin cagaar cagaaran oo leh cadaan guduudan, oo ugu dambeynna soo ifbaxday, iyada oo midabkeedu yahay midab leh cadaan ah.
Seeds waa mid cad, ballaaran, ballaaran oo qoyan. Isugeynta cufnaanta celceliska, midab cad, qaab-dhismeed qurux badan. Tufaaxu waa mid aad u casiir leh, macaan iyo dhanaan, mararka qaarkoodna qadhaadh wacan. Miraha waxay leeyihiin muuqaal qurux badan ku leeyihiin halabuurka:
sonkorta - 12.4%;
ascorbic acid - 11.3 mg halkii 100 g;
walxaha qalalan - 16.3%;
acid acids - 0.57%.
"Bashkir Beauty" iska leh noocyada samobzhodlodnyNoocyada tufaaxa sida Antonovka, Buzovyazovskoye, Titovka Seedling waa rashin wanaagsan oo loogu talagalay iyada.
Inkasta oo noocyada kala duwan ay yihiin jiilaalka hore-qaboobaha, leh xaalad wanaagsan oo diiran, miraha waa laga saari karaa bilowga bisha August. Haddii xagaagu ahaa qabow, markaas tufaaxu wuxuu u bislaa bisha Sebtembar.
Waa muhiim! Tufaaxa caanuhu waxay u muuqdaan inay ka gooyaan geed, gaar ahaan haddii geedku aanu lahayn qoyaan ku filan.
Fruiting wuxuu dhacaa 4-6 sano kadib markaad degto. Laga soo bilaabo hal geed waxaad qaadan kartaa ilaa 80 kg oo miro ah, oo muujinaysa dhalidda sare.
Bisaylka macaamiisha ee tufaaxa ayaa yimaada isbuuc ka dib goosashada. Miro wanaagsan oo la kobciyo iyada oo la abuurayo xaalado aan fiicnayn waxaa lagu kaydin karaa ilaa 130 maalmood. "Quruxda Bashiir" ayaa si gaar ah u jeclaanaysa warshadaha sii kordhaya, sababtoo ah waxay soconaysaa waqti dheer waxayna ku dhowdahay inaanay dhaawacneyn inta lagu jiro gaadiidka.
Geedaha si deg deg ah ayay ula qabsadaan cimilada adag, marka ay dhacdo in lagu keydiyo si dhakhso ah ayaa loo soo celiyaa.
Cudurada iyo Caabuqa Cayayaanka
Kala sooc mid deggan si loo jabiyo cudurada kala duwan iyo cayayaanka, taas oo, laga yaabo, waa dhibta kaliya. Cudurka caadiga ah waa cagaha madow, oo ka mid ah cayayaanka, geedka tufaaxa ayaa ah kuwa ugu nugul weerarrada aboorka.
Ka soo horjeeda cudurrada dhirta tufaaxa: "Delan", "Antrakol", "Poliram", "Topsin", "Skor". Ka takhaluska aboorka iyo cayayaanka kale ayaa ku caawin doona: "Muuqaalka", "Fastak", "Kemifos", "Detsis", "Calypso", "Karbofos".
Kala duwan ayaa loo tixgeliyaa universal, tan iyo miro ayaa loo isticmaali karaa labadaba cusub, iyo qasacadeysan, qalajiyey iyo habab kale oo loo adeegsado.
Beerto geedo tufaax ah
"Quruxda Bashiir" - geedka tufaaxa ma aha mid sax ah, hababka saxda ah ee beerto iyo daryeelka ayaa kor u qaadi doona tayada dalagga.
Wixii koritaanka buuxda iyo aasaaska wanaagsan ee dhirta, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka beeritaanka geedka tufaaxa oo lagu ogaado meesha ugu haboon. Waqtiga soo degitaanka sidoo kale waa muhiim.
Gobollada koonfureed waxay ka fiican tahay in la aaso tufaaxa xilliga dayrta. Beeridda waxaa la fuliyaa bilawga Oktoobar, xilliga dayrta-xilliga qaboobaha sapling wuxuu "heli doonaa raaxo" oo si fiican u qaadaa xididada, iyo guga waxay awood u yeelan doontaa si buuxda u hesho xoog koritaanka wanaagsan. Meelaha leh xaalado cimilada oo aad u daran, waxaa fiican in la beero guga si ay geedku u qaadato xidid iyo koraan ka hor bilawga qaboobaha qabow.
Waa muhiim! Beerto "quruxda Bashiir" xilliga guga, hubi in aad marka hore marar badan aadna aad u badan biyaha u siisid seedling si looga hortago qalajinta nidaamka xididka.
Inkasta oo darajada iyo qadarin aan qabyo ahayn, laakiin waa mid aad u xasaasi u ah xaaladaha aan fiicnayn. Waxaa fiican in aan ku beeran geed geedeedka dhinaca waqooyiga ee qorshaha, sababtoo ah dabaylaha qabow ee waqooyiga u dhaawici doonaa inta lagu jiro muddooyinka ubax iyo bilawga ah ee fruiting.
Geedka-geedka "Bashkir Beauty", sida ay sheegeen bannaanka, si liidata u koraan oo ku beeray miro carrada qoyan iyo meelaha biyaha ku dhow dhow. Nooc dhexdhexaad ah oo carrada dhexdhexaad ah iyo ciidda kaynta dhoobada ah ee loamy, iyo sidoo kale carrada madow, waa kuwo ku habboon.
Nidaamka degitaanka waxaa lagu arkay, sida noocyada kale ee geedo tufaax ah - 4 ilaa 4.
Cabbirka ceelka beerto ayaa la diyaariyaa iyadoo ku xiran mugga nidaamka xididka iyo da'da seedling, laakiin waa inay ahaataa ugu yaraan 0.6 m qoto dheer iyo 0.8m dhexroor. Qeybta hoose ee ceelka waxaad u baahan tahay inaad wadato qadar xoog leh, kaas oo u adeegi doona sidii taageero geedka yar yar.
Naqshad waxay ubaahantahay quudinta koowaad: Isku qas lakabka dhul bacrin ah oo leh 60 g oo ah superphosphate, 20 kg oo ah humus iyo 50 g oo ah sulfate potassium. Ka hor intaan la beeri kobcinta xididdada iyo ka saar jajabka wasakhaysan ama burburay.
Qoorta xididka waa inay ahaataa 5 cm ka sarraysa heerka dhulka. Dunida ku wareegsan jirridda waa inay noqotaa mid is dulfuulaysa, laakiin marnaba lama cusbeyn.
Barkad carrada waxaa lagu abuuraa qashinka si loo qabto biyaha waraabka. Ka dib markii la beero, geedka ayaa si deeqsinimo ah u waraabiyaa, oo ciidda la mulched leh humus, jilif yar oo geedo ah oo lagu daro ash.
Qaybinta waa in lagu dhajiyo caanaha, laakiin xaalad kasta ha ahaato in ay u fidiso, si aanay u keenin waxyeello dhumucdeeda iyo koritaanka jirridda.
Horumar miro wanaagsan wuxuu si toos ah ugu xiran yahay daryeelka caafimaad ee geedka tufaaxa. Daryeelka habka saxda ah ee quudinta, waraabinta iyo noocyada kale ee fayadhowrku waxay hubiyaan horumarinta caafimaadka leh ee geedka.
In wheel-wareegga wareegga, waxaa lagama maarmaan ah si joogto ah loo dabciyo ciidda iyo haramaha nadiif ah. Loosinta ciidda agagaarka seedling dhalinyarada waa in loo sameeyaa si qoto dheer oo aan ka badnayn 12 cm si aan u waxyeeleynin xididada. Labadii sanno ee ugu horreysay ka dib markii la beero, waa lagama maarmaan in la qaado dhirta iyo saarista dhirta ku wareegsan geedaha ka hor waraabinta.
Compost ama humuling humus waxay u adeegtaa dhirta dhalinyarada ah sida bacriminta wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa in laga fogaado baahida loo qabo dabacsanaan iyo jaridda dhirta. Sidoo kale, mulching waxay caawisaa haynta qoyaanka waxayna hagaajisaa aeration.
Sodding waa hab fiican oo kor loogu qaado wax soo saarka dalagyada dhirta, sababtoo ah hagaajinta lakabka ciidda. Gaar ahaan markii ugu horeysay ee beerashada "Bashkir Beauty" waxaa haboon in la siiyo taxadar badan siinta waraabinta, waa inay ahaataa mid aad u badan oo isdaba joog ah oo lagu sameeyo isbeddel xaaladaha cimilada.
Ma taqaanaa? Celtic, erayga "Janno" wuxuu u eg yahay Avalon - taas oo macneheedu yahay "waddanka tufaaxa."
Laga bilaabo quudinta inta lagu jiro xilliga soo degitaanka waxaa la soo gabagabeynayaa sanadka labaad. Dhaqanka dhalinyarada ah ee aan dhalan oo dhalaalaya samee saddex jeer inta lagu jiro xilliga sii kordhaya:
Guga waxaa lagu sameeyey xal of HOL - 10 litir oo biyo ah 2 qaado oo ah HOL; waxaa la keenaa xididka.
Summer waxaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo koritaanka caleemaha iyo kordhiyo mass cagaaran, halkan waa Bacriminta adag Bacriminta sodium, "Ideal".
Bacriminta dhirta dayrta waxay caawiyaan diyaarinta jiilaalka - waxay ka sameeyaan Bacriminta potash-fosfate.
Waa muhiim! Bacriminta Nitrogan waa in aan loo isticmaalin quudinta xilliga dayrta, waxay joojiyaan dhicitaanka geedka tufaaxa.
Marka geedku bilaabo inuu midho siiyo, waxaad u baahan tahay inaad u guurto afar jeer oo quudin ah. Waxaa fiican inaad ku dalbato Bacriminta foliar ee xilliga xagaaga, si dhakhso ah ayey u nuugaan. Bacriminta tufaaxa waa ka fiicnaan ka dib markaad waraabisid.
Ka hortagga ugu fiican ee cudurada iyo cayayaanka waa daryeelka saxda ah - dhaqanka xooggan, oo si wanaagsan loo qaboojiyo waa mid aan loo adkeyn karin dhibaatada marka loo eego mid daciif ah. Codso dhammaan Bacriminta waqtigeeda, iyo sidoo kale ciribtirka caleemaha jir ah iyo kuwa ay saameysey.
Tayada abuurka abuurista ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaaraya, sidaa daraadeed waxay ka fiican tahay inaad ka iibsato geed ka soo iibsanaya iibiyaal lagu kalsoon yahay iyo dukaamo khaas ah. Cagaarshowga waa in lagu daboolaa aagga aad degan tahay.
In dagaalka ka dhanka ah cayayaanka iyo ka hortagga, waxaa haboon in la xusuusiyo shimbiraha, waxay yihiin difaacayaasha ugu fiican ee ka hortagga cayayaanka. Haddii aad ogtahay in geedka jirku hore u jiran yahay, ka dibna habka ugu waxtar leh waa isticmaalka kiimikada.
Inta lagu jiro manjooyin asaasi ah, 2-3 laamood ayaa laga tagaa shtambar, kuwaas oo lagu tilmaamayo jihooyin kala duwan, laakiin aan gudaha ahayn. Dareewalka xarunta waa inuu ka dheer yahay kuwa kale, iyo mabaadiintaan waxaa lagu ixtiraamayaa manjooyin kasta oo xiga.
Xoqitaanka ayaa loo sameeyaa ujeedooyinkaas oo kale:
ka hortagga ciridka;
dib-u-nooleynta geed iyo kororka miro-dhiska;
yareynta dhagxaanta, taas oo yaraynaysa khatarta cudurka.
Ma taqaanaa? In miraha hal tufaax waa heerka maalinlaha ah ee iodine, taas oo lagama maarmaan u ah hawlgalka buuxa ee qanjirka thyroid.
Ka dib goosashada (Agoosto - Sebtembar), waraabinta dhaadheer ee ugu danbaysa waa la sameeyaa si ay unugyada dhirta tufaaxa u buuxsamaan qoyaan iyagoo aan qibrad lahayn. Ka hor inta aadan fulin quudinta ugu dambeysa ee asliga ah waa in laga saaraa mulch.
Si looga hortago jiirka, jirridda waxaa lagu duudduubay maro, tar ama alaab kale oo la heli karo. Xajmiga waxaa lagu sameeyaa bilawga cimilada qaboobaha (xilliga dayrta goor dambe), haddii ay tahay waqti hore, waxaad sii dheereyn kartaa xilliga sii kordhaya, taasoo halis u ah jiilaalka.
Ka dib marka caleemaha hoos u dhacdo waxaa suurtagal ah in lagu daaweeyo birta la yiraahdo birta macdanta ama HOL si looga hortago cudurada iyo cayayaanka. Caleemaha dhaca waa in la burburiyaa. Hilling of aagga jirridda waxaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo xididada, gaar ahaan dhirta yaryar.
"Quruxda Bashiir" maaha mid ka baqaya sharaf iyo sharaf leh, waxay u baahan tahay difaac gaar ah sanadaha ugu horreeya ka dib marka la beerto. Iyada oo ah degelka iyo daryeelka saxda ah, waxay si fiican u socon doontaa koritaanka, oo horeba sannadka afraad waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato beergooyska koowaad.